အသုံးအများဆုံးကျောက်ထွင်းထုကိရိယာများကဘာတွေလဲ။ - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / အသုံးအများဆုံးကျောက်ထွင်းထုကိရိယာများကဘာတွေလဲ။
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-07-24 မူလ:ဆိုက်ကို
ငါတို့သိတယ်သေံရည်ညွှန်းသည်အမျိုးမျိုးသောသောကျောက်ခဲများအပိုင်းကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများသို့ edမြင်သာသောမြင်ကွင်းကျယ်တစ်ခုနှင့်မြင်သာသောမြင်ကွင်းများကိုဖန်တီးရန်,ဖြစ်နိုင်ပါသည်လူမှုရေးဘ0ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းနှင့်အနုပညာရှင်၏ဗေဒခံစားမှုများနှင့်ဗေဒကိုဖော်ပြပါပုံစံအနုပညာ။ ထိုမှျ, ဘာတွေလဲများသောအားဖြင့်အသုံးပြုထားသောကျောက်ထွင်းထုကိရိယာများ? မင်းSually တွင်မတူညီသောထွင်းထုထားသောလက်ကိရိယာများနှင့်ပါဝါထွင်းထုကိရိယာများကဲ့သို့ပါဝါကြိတ်ကိရိယာများ,rotary ထွင်းထုကိရိယာများ,လက်ကြိတ်ခြင်းကျောက်စသည်တို့ကိုဤဆောင်းပါးတွင်, ကျနော်တို့အဓိကအားဖြင့်ကျနော်တို့လိမ့်မယ်မိတ်ဆက်ပေးကျောက်တုံးနှင့်ကျောက်ခဲနှင့်ကျောက်ဖြစ်သည့်သင့်အတွက်လက်ပျှမ်းစစ်ထွင်းထုကိရိယာနှစ်မျိုးဆောက်.
ကျောက်ခေတ်သည်အိုဖြစ်သည်ကျောက်ထွင်းထုကိရိယာများ ne nes ကိုဖြစ်ပါတယ်Pecially Percussion chisel, ထွင်းထုသောကျောက်များအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ထို့အပြင်သစ်သားထွင်းထုအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ နှစ်ခုစွန်းမှာသံတူ၏အရွယ်အစားအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသည်။ သစ်မာလက်ကိုင်သည် 20 စင်တီမီတာခန့်ရှိသည်။နှင့် tသူသည်နေရာအနှံ့အနေဖြင့်နေရာ၌မပါ0င်ပါ။အရာအနည်းငယ်ဝေးတဲ့အဆုံးထက်ပိုဝေးဖြစ်နိုင်တယ်ကွဲပြားခြားနားသောအထူနှင့်အရည်အသွေး၏ဗူးကိုနှိပ်ဘို့သင့်လျော်သော။ ထုံးစံအားဖြင့်ဟုတ်တယ်အရွယ်အစားသုံးမျိုးခွဲခြားနှင့်ကြီးမားသော, အလတ်စားနှင့်သေးငယ်တဲ့.Tသူကြီးတစ် ဦးeighs1400 ဂရမ်ခန့် ကျောက်ထွင်းထုသည်အခေြခံဖြစ်သောတူတူ,အလယ်အလတ်တစ် အလေးချိန်800 ဂရမ်,ဘယ်သူထို့အပြင်သစ်သားထွင်းထုအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်အခေြခံဖြစ်သော သံတူများနှင့်သေးငယ်သောတစ်ခု600ဂရမ်,အရာ carve နိုင်ပါတယ်အသေးစိတ်။ tသူကအလောင်းကိုအလောင်းကောင်ကိုအနည်းငယ်ကွေးနေတယ်တူ၏မျက်နှာပြင်ရှိပါတယ်10 ဒီဂရီထောင့်အကြောင်းကို.Usually ကဖြစ်ပါတယ်အမှတ် 45 သံမဏိဖြင့်အတုနှင့်မျက်နှာပြင်ခိုင်မာသည်.
ကျောက်စောင်လည်းအခြေခံဖြစ်ပါတယ်ကျောက်ထွင်းထုကိရိယာ။ Blade ၏ပုံသဏ္ finisher ာန်အရ၎င်းကိုချွန်သောစယ်လ်လ်, ချွေတာလ်စယ်လ်, အဆိုပါထောက်ပြ chisel တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ်အခေြခံဖြစ်သောဆောက် ကြီးမားသော, အလတ်စားနှင့်သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားနှင့်အတူ။ တစ်စီးnd tသူကြီးကျယ်သောပြားချပ်ချပ်ချွေတာသည်ပြားချပ်ချပ်အတွက်အသုံးပြုသည်။ အလယ်အလတ်နှင့်သေးငယ်သည့်အပြားပြားပြားကို polishing နှင့်အသေးစိတ်အတွက်အသုံးပြုသည်။ အထူ - ဓါး semicircular စယ်လယ်လ်ကိုသုံးနိုင်သည်ထုခဲယဉ်းသောကျောက်နှင့်ပါးလွှာသောဓါးနှင့်ပါးလွှာသောထွင်းထုပုံစံများနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ။ သွား chisel ကြမ်းတမ်း sort ဖို့အသုံးပြုသည်ဝတ္တုကြီးမားသောအရွယ်အစားသို့။ ပစ္စည်းအရ၎င်းကိုသာမာန်နွေးထွေးသောစိုင်လ်နှင့်ဘိ cbise carbide chisel သို့ခွဲခြားနိုင်သည်။ ယခင်ကအမှတ် 45, အမှတ် 60, T7 သံမဏိနှင့်ရထားလှေသံမဏိကိုလက်ခံသည်။ Blade-tips ၏အတိမ်အနက်နှင့်ခိုင်မာမှုအရသိရသည်၏အုတ်ချခြင်းဆောက်၎င်းတွင်လျှောက်လွှာအမျိုးမျိုးရှိသည်။ဒါပေမယ့် tသူအားနည်းချက်ကခက်ခဲပြီးခက်ခဲပြီးလွယ်ကူသောပွန်းစားသည်။ အဆုံးစွန်သောကွဲပြားခြားနားသောပုံစံမျိုးစုံ၏ YG8 ဓါးသွားကိုအသုံးပြုသည်အရာခဲယဉ်းသော,နှင့်ခံနိုင်ရည်ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ကွေး။
ကျနော်တို့အရင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း, လက်ထွင်းထုကိရိယာများ မှလွဲ. MA ရှိပါတယ်နအသုံးဝင်သောပါဝါကိရိယာများအရာထွင်းထုများအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤတွင် Mibond အကြံပြုပါသည်ယန္တရားအပြည့်အဝစက်ကိရိယာများကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်အထူးပြုသည့်ကုမ္ပဏီElectric Mini Grinder နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, Rotary Tool Kit, Mini Grillအပါအဝင်အိမ်သုံးအသုံးပြုရန်ပါဝါကိရိယာများနှင့်diy rotary tools များ။သင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိမ့်မည်။
ပါဝါထွင်းထုကိရိယာများ ပါဝါကြိတ်ကိရိယာများ လက်ကြိတ်ခြင်းကျောက် rotary ထွင်းထုကိရိယာများ အထောက်အကူပြုပါဝါကိရိယာများ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အတူလျှပ်စစ်အသေးစားကြိတ် grinder Rotary Tool Kit အပိုပစ္စည်းများနှင့်အတူအသေးငယ်တဲ့ကင် အိမ်သုံးအသုံးပြုရန်ပါဝါကိရိယာများ diy rotary tools တွေကို